FAKANA AN-KERINY TERATANY KARANA : Tambajotra goavana ahitana olona 11 rava
Taorian’ireo trangana fakàna an-keriny nisesy teto an-drenivohitra sy tamin’ny Faritra maro dia nisy ny paikady napetraky ny mpitandro filaminana, nentina nikarohana ireo olon-dratsy tao ambadik’izany. 27 août 2019
Vokany, nitombo isa ireo jiolahy tratran’ny vela-pandriky ny zandary ary isany nahazoana angom-baovao mahakasika izany ny teto an-drenivohitra. Raha ny tatitra voaray, tamin’ny 05 aogositra 2019 no nisy “ kidnapping” teratany karana mizaka ny zom-pirenena frantsay teny Ankadivato.
Naharay vaovao momba izany ny teo anivon’ny Vondron-tobim-pileovan’ny Zandarimaria Analamanga, ka nanomboka teo no nisokatra ny fanadihadihana. Niainga tamin’ny angom-baovao sy ny famotorana dia nisy olona voasambotra ny 18 aogositra 2019, manoloana io fisamborana io anefa dia nisafidy ny tsy hanome vaovao mihitsy ny fianakavian’ ilay niharan’ny fakàna an-keriny ity. Niaiky ny heloka vitany sy nanondro ireo namany ireo jiolahy ireo, ka izany no nahafahana nisambotra ny hafa, izay efa nisy nitsoaka tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony. Miisa 11 izy ireo ka misy mpivady, 05 ny vehivavy ary 06 ny lehilahy.
Tamin’ny fanadihadiana azy ireo ihany no nahafantarana ireo fitaovana maro nampiasaina tamin’ny fanatanterahana ny asa ratsy, toy ny “moto scooter” miisa 04 , basy poleta vita vahiny 02 sy bala 49, finday 04, ody gasy 02. Ankoatra izay dia nampiasa karapanondro hosoka maromaro ihany koa izy ireo nahafahan’izy ireo nividy “puces” maromaro hampiasaina. Efa tafaverina amin’ny fianakaviany io Karana nalaina an-keriny io taorian’ny fandoavana ny vola notakin’ ireo jiolahy. Manentana ny rehetra hatrany moa ny Kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana Analamanga ny amin’ny hanomezana vaovao marim-pototra raha sendra misy trangan-javatra mampanahy.